တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးH.E. Mr. Wouter Jurgens အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးH.E. Mr. Wouter Jurgens အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Submitted by cincdsmyanmar on Wed, 07/29/2020 - 16:31
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် - ၂၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများ ပြီးဆုံး၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ တော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယအတွင်းဝန် Ms. Linda van dar Horst တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် နှစ် ပေါင်း ၇၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် သွားမည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်သည် ပြည်သူကရွေးချယ်ထားသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းလျှောက်လှမ်းမှုကို ခိုင်မာအောင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေ အနေများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံ၌ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိရာတွင် မည်သည့် နိုင်ငံမဆို မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးကိုသာ ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်း၊ ပကတိအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီ သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသာကျင့်သုံးသင့်သည့် အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းပြီး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။